TRACTOR "BELARUS" MTZ-1523: SHARAXAAD, SOO SAARAHA, SIFOOYINKA, JIHADA, SAWIR - MASHIINKA BEERAHA
Ugu Weyn Ee Mashiinka beeraha
Gawaadhida lama dallacsiiyo dadka sida dareenka dadkoo kale ah, yiraahdo, noocyada ugu dambeeya ee baabuurta rakaabka ah ama rikoodhka riwaayadaha ah. Laakiin iyaga oo aan lahayn suurtagal ah in la qiyaaso beeraha iyo dhinacyada isgaadhsiinta. Noocyada mashiinada noocan oo kale ah ayaa si joogto ah u ballaarinaya, barnaamijka wax soo saarka MTZ kama reebna. Tixgeli mid ka mid ah tareenada ugu caansan ee warshadkan, oo ah MTZ-1253.
Qaar ka mid ah taariikhda abuurista
Dhaqdhaqaaqa caalamiga ah MTZ-1523 waxaa soo saarey Warshadda Traktor Minsk. Tani waa wakiil ka tirsan qoyska halyeeyga ah ee "Belarus" (oo ah khadka "Belarus-1200").
Kuwa ka horreeyay ee noocan ah waa mashiinnada si fiican loo yaqaan MTZ-82 iyo MTZ-1221.
Laakiin waxay ka hooseysaa "shan iyo tobnaad" ee sifooyinka awoodda iyo xakamaynta. Tani waxay sidoo kale caddaynaysaa shuruudahan oo kale sida fasalka xajmiga: nooca 1523 waxaa loo qoondeeyey qaybta 3, halka 1221 loo qoondeeyey qaybta 2aad, 82na waxa loo qoondeeyey isku dheelitirnaan 1.4.
Sannadaha soo-saarka, MTZ-1523 wuxuu aasaas u ahaa qoyska oo dhan tareeno, oo gacan ka geystey casriyeyn joogto ah. Isbeddelka ayaa ahaa badi baabuur. Marka, mashiinada leh indices 3, 4 iyo B.3 waxaa jira mishiinno awood leh oo leh 150 litir. Iyada, iyo jaantuska 5 waxay ka dhigan tahay in hortaada adiga - baabuur leh 153-fiilo gawaariga ah. Muddo yar ka dib, naqshadeecada dibadda laga keeno DEUTZ ayaa lagu darey qaybta cutubyada.
Sanadka 2014-15 soosaarida qaabka leh "index" oo dheeraad ah "6", oo leh hargab hiddo-joojin ah (isla waqtigaas, nootan ayaa bilaabay in lagu dhejiyo "loola").
Waa muhiim! Taargada tilmaamaya tirooyinka taxane ah ee cirifka iyo mishiinka waxay ku yaalaan gadaasha dambe ee cabirka, oo u dhow mashiinka saxda ah. Hoosta hoose waxaa la dhigayaa miis kale oo leh lambarka cabirka laftiisa.
Isbedelada ugu dambeeyay ee qalabka ayaa la sameeyey macno ahaan sanadkan. Waxay saameeyeen qaabka kuleylka ee mishiinka inta lagu jiro hawlgalka. Isbedelada cusub ayaa helay indices T1, T1.3 iyo T.3.
Naqshadeynta ayaa soo baxday si aad u guuleysatay, ka dib markii dhowr ah oo horumarin ah la sameeyay, tareenka MTZ-2022 oo ka tirsan fasalka 4aad ee tartanka ayaa bilaabay in la soo saaro saldhiggiisa.
Saameynta shaqada beeraha
Dhaqdhaqaaqa caalamiga ah waxaa loogu talagalay in uu sameeyo hawlo kala duwan, sida:
Dhallinta nooc kasta oo ciid ah;
beerashada joogtada ah iyo burburinta;
diyaarinta ciidda diyaarinta;
Beerta beereed la adeegsanayo isticmaalka dhinacyada kala duwan;
bacriminta iyo buufinta;
Goynta dalagyada la kariyey;
qaadista iyo ka saari cawska iyo cawska beerta;
shaqooyinka gaadiidka (gaadiidka qalabka ama gawaarida leh xamuul).
Si loo beeray dhul cusub oo bikrad ah, dhererka ciriiriga ah ee DT-54 wuxuu noqon doonaa door wanaagsan.
Iyadoo la tixgelinayo suurtagalnimada in la shaqeynayo tiro badan oo ka mid ah cutubyo gaar ah iyo isku-dhafan, waxay soo baxday in MT31523 uu awood u leeyahay in uu fuliyo dhammaan noocyada shaqada ee goobta.
Ma taqaanaa? Intii lagu guda jiray Dagaalkii Waddaniga Waddaniga ah, cagaf-yaraha ayaa mararka qaarkood loo adeegsaday yaraanta taangiyada. Xisaabinta waxay saameyn ku yeelatay saameynta nafsaaniga ah: sida psevdotanki ayaa weerarka ku soo qaaday mugdiga, laydhadhka iyo sirenka.
Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa warshadaha dhirta, adeegyada, iyo dhismaha.
Waxaan u jeedineynaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan qaababka farsamo ee qaabkan. Aan ku bilowno qaybta "hordhac", kaas oo siinaya fikrad guud ee cagaf-cagaf.
miisaanka qalalan (kg): 6000;
ugu badnaan miisaanka guud ee la ogol yahay oo leh load (kg): 9000;
cabbirka (mm): 4710x2250x3000;
dhejiska (mm): 2760;
jumlada hore (mm): 1540-2115;
gawaarida gadaal (mile): 1520-2435;
Miisaanka ugu hooseeya (m): 5.5;
xajmiga taayirada: giraanyaha hore - 420 / 70R24, wheels - 520 / 70R38;
Nadiifinta dhulka (mm): 380;
xawaaraha ugu sareeya (km / h): shaqeyn - 14.9, gaadiidka - 36.3;
qiyaasta xawaaraha dib u dhigma (km / h): 2.7-17.1;
cadaadiska dhulka (kPa): 150.
Baro wax badan oo ku saabsan sifooyinka farsamada, faa'iidada iyo raaxaysiga tareenada T-30, DT-20, T-150, MTZ-80, K-744, MTZ-892, MTZ 320, K-9000, T-25.
Mashiinka aasaasiga ah ee MTZ-1523 waa naaftada D-260.1. Tani waa injineerka 6-silsilad ah oo la adeegsado. Waxay u taagan tahay xogtaas oo kale:
mugga - 7.12 litir;
dhexdhexaadiyaha silsilad / miskaha - 110/125 mm;
qiyaasta isku dhafka -15.0;
awood - 148 litir. c.
miisaanka ugu sareeya - 622 N / m;
xawaareynta xawaaraha (rpm): Magaca - 2100, ugu yaraan - 800, ugu-dhaafinta - 2275, oo leh miisaan fara badan - 1400;
qaboojinta - dareeraha;
Nidaamka tamareynta - isku dhafka;
miisaanka - 700 kg.
Heerka deegaanka: Heerka 0/1. D-260.1 mashiinka
Waa muhiim! Qaadashada gawaarida cusub waxay qaadataa 30 saacadood: qeybtii koowaad ee xilligaan waxaa loo adeegsadaa hawlaha gaadiidka fudud, ka dibna waxaa loo wareejiyaa shaqada goobta iftiinka iyadoo la adeegsanayo GNS (nidaamka hiddaha lagu rakibay). Nadiifinta shiidan ee saliidda ayaa la nadiifiyaa 10kii saacadoodba mar.
Mashiinnadani waxaa lagu qalabeeyaa mashiinka shidaalka ee shirkadda Czech ama Motorpal ama injirta Ruushka ee Yazda. Habka kuleylka ah ayaa si toos ah loo kontaroolaa iyadoo la isticmaalayo labo heer-kuleyl.
Gawaarida kale ayaa lagu rakibi karaa cagafciyaddan:
150 hp D-260.S1 oo leh astaamo isku mid ah. Dhab ahaan, waxaa jira faraqyo u dhaxeeya qiyaasta eco-ka (sida ka duwan mashiinka saldhigga, midkani wuxuu ka soo baxayaa heerarka Heerka II);
xoogaa ka xoog badan (153 hp) iyo iftiin (650 kg) D-260.S1B3. Deegaanka "dulqaad" - Heerka IIIB;
D-260.1S4 iyo D-260.1S2 oo leh xajmiga ugu sarreeya ee 659 Nm;
Deutz TCD2012. Tani sidoo kale waa mashiinka 6-mile-ga ah. Hase yeeshee, miisaan yar (6 l), wuxuu kobciyaa awood shaqo oo ah 150 litir. iyadoo leh, halka ugu badnaantii uu yahay 178. Si aad u noqoto oo u xoqdo: tii ugu sarreysay - 730 N / m.
Dhamaan mishiinnadan ayaa si fiican loo xaqiijiyay xaaladaha nolosha dhabta ah. Dabcan, mishiinada dibedda laga keeno waxay ku guulaystaan ​​tayada golaha iyo hadiyadaha kaydka korontada, laakiin dhinaca D-260 iyo noocyada kala duwan, helitaanka qaybaha qaybaha, dayactirka, iyo waayo-aragnimada dayactirka ee ay soo uruuriyaan farsamada.
Awoodda shidaalka iyo isticmaalka shidaalka
Mugga mugga weyn ee shidaalka - 130 l, dheeraad ah - 120.
Ma taqaanaa? Lamborghini supercars waxaa loo tixgelin karaa "dhaxalka" ee tractors. Ka hor inta aan la saarin baabuurta awoodda leh, milkiilaha shirkadda, Feruchcho Lamborghini, ayaa aasaasay warshad lagu soo saaro qalabka beeraha iyo qaybo ka mid ah.
Dammaanad buuxda ayaa ku filan wakhti dheer: qiimaha shidaalka gaarka ah sida baasaboorka waa 162 g / l.s.ch. Xaaladaha dhabta ah, inta badan waxay ku xiran tahay isbedelka iyo qaabka hawlgalka, sawirkani wax yar ayuu kordhi karaa (badanaaba aan ka badneyn 10%). Waxaa soo baxday in isbedelka ay suurtagal tahay in la sameeyo iyada oo aan la shaacin.
Qalabka daboolka leh cylindrical glazing wuxuu bixiyaa xaalado caadi ah hawlgalka badbaadada. Waa mid aad u adag oo ku xiran qaabka waxana uu leeyahay qeylo iyo qalbi jilicsan (oo ka hadhay wax badan oo laga rabay "Belarus"). Waad ku mahadsan tahay habka muraayadda, indhoolayaasha qorraxda iyo ergonomics-si fiican loo fekeray, waa mid ku haboon in la shaqeeyo.
Helitaanka koontoroolada aasaasiga ah uma baahna diyaargarow gaar ah: dhammaan qalabka iyo alwaaxyada waa la arki karaa, hadday lagama maarmaan noqoto, ka shaqee qaabka ugu dambeeya, kursigu wuxuu u wareegayaa 180 darajo. Kursiga laftiisa ayaa kor u kaca, booskiisa waxaa lagu hagaajin karaa jihooyin dhowr ah.
Qaybta isdabajoogu waxay la socotaa bamka mitrooga, makiinada isduljumintu ma daboolayso qalabka kantaroolka. Maaraynta xukunka ladagaallanka ah waxaa lagu qalabeeyaa fiilooyin aan shidaal lahayn, iyo sidoo kale jajabka iyo bareegga jajabka.
Waa muhiim! Qayb ka mid ah 5 nalalka laambadaha ayaa lagu rakibay guddi qalabeed.
Muuqaal aad u fiican ayaa la bixiyaa ma aha oo kaliya muraayadaha dib u eegida, laakiin sidoo kale muraayadaha dusha iyo gadaal iyo gawaarida dusha sare leh oo ay weheliso "tirtireyaasha".
Sida ikhtiyaari ah, qaboojiyaha waxaa lagu rakibi karaa (kululeeyaha waxaa la siiyaa qalab caadi ah).
MTZ-1523 wuxuu leeyahay qalab laba-saxan oo engegsan. nooca rasmiga ah oo xiran. Nashqadiisu waa la kordhay oo waafaqsan qaybta kontoroolka hydrostatic. Gorgortanka, iyadoo ku xiran qaabeynta, wuxuu leeyahay 4 ama 6 marxaladood. Caanwayntan ayaa ah midka ugu horreeya, oo ka shaqeynaya qaaciddada 16 + 8 (16 nooc oo hore loogu soconayo iyo 8 - dib u noqoshada). 6-xawaaraha germiga Jarmalka ee ZF wuxuu leeyahay tiro balaadhan: 24 + 12. Run, waxaa loo dhigaa lacag.
Mishiinka korontada ku xiran ee gadaal u xiran waa madax banaan, 2-xawaarid. Waxaa loogu talagalay hababka wareegga ah ee 540 ama 1000 rpm. PTO-ka waa la heli karaa iyada oo ah ikhtiyaar. Waxay leedahay hal xawaare oo "noqota" gudaheeda 1000 laab / min.
Nidaamka isboortiga waxaa loogu talagalay xoogga shaqeeya ee 12 V iyo dhaliyaha 1.15 ama 2 kW (waxay dhammaan ku xiran tahay qaabka gaarka ah). Marka la bilaabayo, nidaam keenaya 24 V (6kW) ayaa la hawlgeliyaa.
Laba beteriyo ku xiran isbarbardhig waxay leeyihiin awood 120 A kasta.
Ma taqaanaa? Sannad kasta (taniyo 1998), majaladda talyaaniga ee Trattori waxay leedahay tartan tartanka sanadka, taas oo go'aaminaysa nooca casriga casriga ah ee ugu fiican marka la eego qaabeynta iyo isticmaalka.
Marka ay lagama maarmaan noqoto in macaamiisha lagu xiro qaab unugyo lakulmay, waxaa la isticmaali karaa xirmooyin isku xiran oo 9 ah.
Xakamaynta tooska ah
Nidaamka xakamaynta hydrovolume waxaa ka jira laba bambo: midka bixiya awooda (oo leh mugga 16 "kow" markaad u jeeddo) iyo dhexdhexaadiye (at 160 cc / rev).
Qaybta farsamooyinka waxay ka kooban tahay laba silsiladood oo kala duwan iyo ul.
Qaabkan, waxay yihiin 3-qaybi pneumatic, oo ku shaqeeya qubeyska saliidda. Waxay ka shaqeeyaan dhinaca dambe iyo muraayadaha hore (iyada oo loo marayo wadajirka wadada) waxaana ku matalaya goobahaas oo kale:
shaqeynaya lugaha danbe;
gawaarida saaran taayirrada dambe.
Gawaarida, waa fariin dheeraad ah oo ay leedahay farsamo qaas ah. Xakamaynta kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada ayaa la xirxiray kantaroolka farsamada gacanta.
Qalabka hore iyo kan danbe
Qaybta hore ee dariiqa wadnaha ee nooca loo yaqaan 'light beam' ayaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo nidaam isku dhafan iyada oo la adeegsanayo wiishka gawaariga ah iyo xirmooyin xiran oo xaddidan. Biinanka dhirta - laba-qaadasho.
Waa muhiim! Markaad ku socoto waddo deyr leh, waxaa lagu talinayaa in la joojiyo wadada gawaarida ee hore: Tani waxay hoos u dhigi doontaa xidhashada taayirrada hore iyo qeybaha cutubkan.
Waxaa lagu xakameynayaa iyada oo la adeegsanayo xatooyo kala duwan iyada oo la kaashanayo xayiraadda EGU. Buundada waxaa loogu talagalay 3 jagadood: kudhisan, qaabka xidhitaanka qasabka ah iyo shaqeynta iskuxirid otomaatik ah (haddii gawaarida gadaal loo xiro).
Qodobka dambe waxaa sidoo kale lagu qalabeeyaa "qorsheyn". Qalabka ugu muhiimsan wuxuu leeyahay muuqaalka kore ee koofiyadaha hore - laba wiyil oo duurjoogta ah waxay gudbinayaan wareegga gawaarida iyadoo la adeegsanayo laba dildilaacyo. Qalabka kala duwan.
Chassis, nidaamka hidaha iyo GNS
Chassis MTZ-1523 waxaa ka mid ah:
Naqshad-yar-yar oo leh ganaax adag;
taayirrada hore iyo kuwa dambe. Marka la fuushay wadooyinka isgoysyada dhabta ah waxay helayaan gawaarida gawaarida.
Habka tamarta mugga 35 litir ayaa lagu qalabeeyaa bamka la gashado. Tani waxay noqon kartaa mashiin ku qoran D-3, UKF-3 ama NS 32-3. Waxay wada leeyihiin sifooyin isku mid ah:
qiyaasta shaqada ee 32 cu. cm;
wax soo saarka waa 55 l / min;
cadaadiska shaqada - illaa 20 MPa.
STS - kala-duwan oo kala duwan, oo leh Bosch Block ah. Nidaamkan 3-qaybood waxaa loogu talagalay inuu ka shaqeeyo 4 boos. Kuwa ugu muhiimsan ee qalabkiisa waa:
xakamaynta mishiinka (electrohydraulics).
Isku xirka hore (xulasho) ayaa lagu sameeyey qaababka dhululubada, iyo dusha qabaana wuxuu leeyahay qaabka geeska ah oo leh 4 xiriir.
Qalabka korontada ku shaqeeya ee qalabka korontada (RLL) iyo macaamiisha dibedda ee BELARUS-1523 waxaa ka mid ah haanta saliid (1) oo leh 35 litir oo leh sheyga 20 mikron (2); mashiinka qashinka (3) oo leh wado la bedeli karo (4); (5), oo ka kooban 3 qaybood qaybinta (LS) 6 oo leh gacanta gacanta, korontada (amniga) valey 7, regulator elektrotrogidraelichvevy (EHR) 8. laba silsiladood oo ah RLL (9), tuubooyin iyo tuubooyin.
10 EHR waxaa lagu xakameynayaa qunsuliyadda 10 Goobta waxaa lagu xakameynayaa calaamadaha jawaab-celinta ra'yi-celinta: boosaska (11), awoodda (12) iyo kantaroolatooraha ku salaysan microprocessor 13. fulinta algorithm qeexan.
Meelaha dhexdhexaadka ah ee isku dhajinta 14 ee qaybiyaha 6 iyo EHR, saliida mashiinka 3 waxay u dhexeeyaa boodhka furan ee furan 7 ilaa taangiga shidaalka iyada oo loo marayo filterka (2).
Marka la rakibayo qalabka 14 ee qaybiyaha ee booska shaqada (qaadista, hoos u dhigista) saliida mashiinka faleedka waxay galeysaa mashaariicda fulinta mashiinada beeraha.
RLL (15) waxaa xakameynaya maamulaha (EHR) (8) oo leh kontoroolikada elektromagnetic, waxay ka kooban tahay gawaarida gadaalka (16). qaadista spool (17) iyo hoos ujada hawo (18), oo ay gacanta ku hayaan electromagnets proportional (19). Nidaamka xakamaynta tooska ah ee RLL, iyadoo ku xidhan habka xakamaynta ee loo yaqaan 'operator' ee guddiga xakamaynta, nidaamka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sii wado jagadaas taakulaynta fulinta, sameynta adkeysiga xakamaynta, hagaajinta sifooyinka awoodda ee cutubka adoo u wareejinaya qayb ka mid ah miisaanka hirgelinta ee wadooyinka
Xaaladdan, calaamadaha korantada ee farsamada (2) ee booska (11) iyo dareemayaasha korontada (12) waxay galaan xakamaynta meco-dhaqatada, waxaana lagu barbar dhigaa calaamadda ay ku shaqeyso guddiga kantaroolka (10).
Haddii calaamadahaasi aysan ku dhicin, kantaroole (13) wuxuu abuuraa talaabo kontarool ah mid ka mid ah laba magnets (19) EHR. taas oo ah, iyada oo la adeegsanayo qalabka korontada ee korontada 9, waxay sameeyaan ficil hagaajin ah oo ku saabsan waxsoosaaridda sareeya ama hoos u dhigaya, sidaas darteed dejinta booska fulinta iyo iska caabin adag.
Tilmaamo dheeraad ah
Iyada oo la kala dooranayo maktabada waxay bixisaa nuqul iyo nidaamyo noocaas ah
gadaal toos ah;
Wareejiyaha ZF (24 + 12);
ballast hore oo miisaankiisu dhan yahay 1025 kg;
oo loogu talagalay gawaarida yaryar (labadaba hore iyo hore);
kuraas dheeraad ah;
Ma taqaanaa? 25kii Juun 2006, rikoodhka tirada tarbiilayaasha ka shaqeeya hal goob ayaa lagu duubay goobta ku dhow agagaarka British Airways ee Hallavington. Abaabulayaashu waxay ku lug lahaayeen 2141 qaybood oo qalab ah.
Laga soo bilaabo lifaaqyada, dhirta lafteedu waxay soo saartaa dhoobo lagu beeray noocyo kala duwan oo ciid ah.
Sida jaangooyooyinka kale ee liiska, liistadoodu waa mid aad u weyn, wax kasta oo ku xiran waxaa lagu dhejin karaa cagaf-xayawaanka - ka soo qaada gawaarida daadinta, laga bilaabo beeraha ilaa bacriminta (maaha in la xuso xaabo iyo xargaha).
Khibradda ay ka heshay darawalladaha iyo farsamoyaqaanada ayaa muujiyay awoodda MTZ-1523 iyo cudurada caadiga ah. Faa'iidooyinka caalamiga ah ee loo yaqaan 'Traktor' waa:
mashiinno la isku haleyn karo oo xoog leh;
isticmaalka shidaalka iyo isticmaalka saliida;
joogitaanka naqshadeynta tiro ka mid ah qaybo tayo sare leh;
raaxo raaxo leh oo suurtogal ah in dib-u-celinta si ay u shaqeeyaan qaab muuqaal ah;
la-qabsiga mashiinnada beeraha;
la shaqee tiro badan oo ah qalabka loo yaqaan "trailer" iyo "trailed";
tayada dhismaha wanaagsan;
Ugu dambeyntii, qiimo macquul ah, taas oo, oo ay weheliso helitaanka qaybo qaybo iyo dayactir sare ah mashiinkan ayaa doorasho wanaagsan u ah beeralayda.
Waa muhiim! Si cagajafka cusubi u shaqeeyo sanado badan, illaa iyo TO-1 (125 saacadood), awoodda injirta waxaa loo isticmaalaa ilaa 80% qiimaha magaciisa.
Gawaaridaasi waxay leedahay cilladaheeda sida:
sifeynaya qalabka gacan-ka-qabashada gacan-ka-hadal (ka sokow, had iyo jeer ma suura gal ah in la helo qalabka dayactirka);
xawaarida xirmidda riixista iyo qalabka dhagaha;
Saliiddu waxay ka soo baxdaa mishiinka (badanaa kuma xirna gaas);
tamar saliida daciif ah oo ku socda mashiinka PTO;
Xaalad nagu filan oo ku jirta shuruudaheena waa dayactirka qaybaha Deutz - waxay si fiican u shaqaynayaan, laakiin haddii ay dhacdo in badalado badan oo bedelaad ah qaybo badani qiimo weyn u yeeshaan.
Iyada oo la xidhiidha dhammaan faa'iidooyinka iyo khasaarinta, way fududahay in la soo gabagabeeyo in MTZ-1523 uu yahay mid aad u wanaagsan heerarka gudaha, mashiinka caalamiga ah oo leh faa'iidooyin badan iyo naqshad fiican. Laakiin mararka qaarkood cirifka ayaa keeni kara dhibaato la xidhiidha kulliyadda qulqulka.
Hadda waxaad taqaanaa waxa qalabkan awood u leh, iyo guud ahaan waxaad qiyaasi kartaa qalabkiisa. Waxaan rajeyneynaa, xogtan ayaa waxay kaa caawineysaa in la go'aamiyo doorashada qalabka beeraha, oo horey u iibsatay "Belarus" waxay noqon doontaa kaaliye la isku halayn karo. Diiwaangelinta dalagyada iyo burburkii yaraa ee beerta!
Warcelin ka timid isticmaaleyaasha shabakada
Telefoonku wuxuu la hadlay ninka 1523. Wuxuu leeyahay 4 sano. Wuxu leeyahay qiyaasta soo socda: - mootada, hydraulics, shasis - wax walba way shaqeeyaan. Meel dhibban oo la yiraahdo barkad, kaas oo uu jebiyay shaqada saddex sano ka dib. Waa maxay nooca shimbiraha ah ee aanan fahmin sababtoo ah farsamooyinka aan xirfad laheyn. Waxay u muuqataa inay tahay 1221.
Aabahay wuxuu helay MTZ 1523 cusub oo wuxuu ka shaqeeyay 3 sano. Burburku wuxuu bilaabmay isla markiiba. Dhibaatada marwalba way jirtey (tuubada sanduuqa ayaa matagaysay iyo saliidda 50 litir ayaa uumaraxay ilbiriqsiyo), ka dib 7 bilood kadib pistiska iyo iskuduubka isku xirmay. Wanaagsan, ka dib markii ay jireen dhibaatooyin badan oo culeys ah oo ka dhexjiray gawaarida madaxa gawaarida, hadana si joogto ah 2dii sano ee la soo dhaafay ma aysan sameyn wax mishiinka ah, oo ay madaxa ku dhalaaleen, beddeleen pistiska, iwm ... Anigu waxaan aamusnaa waxyaabo yar. Rubberber ayaa ku guuldareysatay saddex jeer sanadkiiba - dhammaan dabacsan. Laga soo bilaabo kooxo 10-ka ah MTZ 1523, dhammaan tareenadu waxay haysteen dhibaatooyin. Dhibaatooyinka ugu weyni waa mashiinka iyo gawaarida. Хотя замечу и плюсы данной модели - удобная и в полне комфортная кабина( кто работал на Белорусах с маленькой кабиной поимет), легкое рулевое управление( можно управлять одним пальцем). Ну а про минусы я вообще молчу . Сейчас трактор стоит.Ждут когда привезут новый двигатель.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Mashiinka beeraha 2019